Shirka wacyi gelinta shaqaalaha ee cajiibka ah ee sanadka 2019 | Hongli
2020/6/15, shirkadeena waxay qabatay Shirweynahan Hambalyo ee Sare u kaca ee Sanadka 2019. Intii shirku socday, ugu horeyn, maamulahayaga Mr.Xie wuxuu soo koobay guulaha sanadkii la soo dhaafay. Cabbirka iibka ee mashiinka goos gooshu wuu kordhay iyo farsamada habka qalabka kor u qaadida ee khadka wax soo saarka ayaa leh xirfad badan. Sannadkii hore, shirkaddeennu waxay sameysay dardar-gelinta guuleysta sannadkanna waxaan la kulannaa caqabado. Inta lagu gudajiray sanadka hore, shirkadaheena waxay sameysay barnaamijka mashiinka dharka-qallalka waxayna heleen guulo aad u wanaagsan. Laakiin waxaan weli u baahanahay inaan gaarno faa'iido darrada barnaamijka ka dibna aan dhiirrigelinno.
Dhanka kale, sedex maamule aqoon isweydaarsi dhamaantood waxay kahadlaan qorshaha shaqada ee aqoon isweydaarsi kastaa.
Markaa, maamulahayagu wuxuu amaanayaa shaqaalihii fiicnaa ee sanadkii la soo dhaafay. Mid kasta wuxuu helay shahaadada maamuuska. Shahaadadan sidoo kale waxay matalaysaa dadaallada ay sameeyeen sanadkii hore.
Hagaag, mashruuca ugu muhiimsan inta shirkan lagu jiro ayaa ah in xarunteenna farsamada la dhiso. Waxay ka dhigan tahay in tikniyoolajiyada shirkadeena ay sameysay horumar ballaaran. Iyada oo la kaashanayo xarunta farsamada, awoodda shirkadeena ee hal abuurka cusub ayaa la kordhiyaa. Wax soo saarkeenuna wuxuu noqon doonaa degenaansho iyo debecnaan badan.
Ugu dambayntiina, shirkadeennu waxay amaan u haysaa shaqaalaha aadka u wanaagsan ee barnaamijka mashiinka dharka lagu buufiyo ee Melt. Shaqaalahayagu waxay sameeyeen dadaalo la taaban karo intii lagu jiray barnaamijkan. Tusaale ahaan, markaan iibinay mashiin, maareeyaha xarunta farsamada iyo shaqaale kale oo badan ayaa u tegi doona shirkadda iibsadaha si ay gacan uga geystaan ​​rakibidda dhib la'aan goorta. Dadaalkooda, iibsaduhu wuxuu door bidaa mashiinkeena.